WordPress: Gịnị bụ CMS? Utility na atụmatụ | Site na Linux
WordPress: Gịnị bụ CMS? Utility na atụmatụ
WordPress: Ihe dị ntakịrị banyere CMS kachasị ewu ewu
WordPress bụ sọftụwia ejiri imesi ike na nnweta, arụmọrụ, nchekwa na ịdị mfe nke iji ya mee ihe, nke mere ka ọ bụrụ CMS kachasị ewu ewu taa. Nnukwu SW nke na-arụ ọrụ dị mfe site na nhazi dị ntakịrị, na-ekwe ka ndị nchịkwa Weebụsaịtị na Blogger ọ bụla ma ọ bụ Onye Okike Ọdịnaya Dijitalụ, na-elekwasị anya na ijikwa ọrụ ha, na ịkekọrịta mbipụta ha, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha, dabere na ikpe ahụ.
CMS (site na Sistemụ Njikwa Ọdịnaya Bekee ma ọ bụ Usoro Ọdịnaya Ọdịnaya) WordPress ọ bụghị naanị ngwaahịa bụ isi, onye njikwa ya ọ dị mfe na prediktebul, mana ọ na-enyekwa atụmatụ ndị dị ike na mgbakwunye (Gburugburu, Plugins, n'etiti ndị ọzọ) na-enye ya ohere itolite dị ka ngwa ma kwado uto, mmepe na ihe ịga nke ọma nke weebụsaịtị ndị ejiri ya rụọ.
2 Kedu ihe bụ CMS?
2.3 Ịba uru
2.4.1 Nweta weebụ
2.4.2 Usoro mmụta ngwa ngwa
2.4.3 Ọdịnaya na njikwa akụ
2.4.4 Nchịkwa na njikwa
2.4.5 Nkọwapụta Onye Ọrụ
2.4.6 Ederede ederede zuru ezu
2.4.7 Nhazi ọdịnaya
2.4.8 Programming ngwa mgbakwunye na ihu
2.4.9 Configurable / customizable visual imewe
2.4.10 Iche iche ọdịnaya na nhazi nhazi
2.4.11 Ọnọdụ SEO
2.4.12 Oru oma, ngwa ngwa na ala akụ oriri
2.4.13 Nkwado teknụzụ na ndị ọrụ obodo
3 Kedu ihe bụ WordPress?
3.1 Ugbu a
Ugbua n'ime ederede ndi ozo banyere WordPress na Blog Blog sitere na Linux Anyị elebala anya n'akụkụ dị ka: Gịnị ka ọ bụ, yana mbipụta afọ 2.015 a na-akpọ «Izute ọhụrụ WordPress.com ọhụrụ, Calypso!«, ntinye ya na nhazi ya na Apache2 na Nginx, ya na mbipụta nke afọ 2016 na 2018 akpọrọ «Wụnye na ịhazi WordPress 4.5 Multisite na Debian Jessie« y «Etu esi wụnye WordPress na Ubuntu 18.04 na nkwekọrịta?« otu.
Emepụtara mbipụta banyere ngwa ha bara uru ma ọ bụ kachasị amasị ha n'oge 2016 na mbipụta «8 na-adọrọ mmasị WordPress plugins maka ebe nrụọrụ weebụ gị« y «3 Freemium Plugins nke ị gaghị echefu na WordPress gị«. Agbanyeghi na ebipụtabeghị edemede ọ bụla na isiokwu ha na ihe ndị ọzọ dịka akụkụ nke nhazi ma ọ bụ amụma nchekwa.
Na post a, anyị ga-eme ka o doo anya Gịnị bụ CMS?, kedu uru ọ na-enye na njirimara ndị akọwapụtara ya dị ka SW, ma e wezụga ikwupụta na ọ bụ WordPress.
Tupu ịkọwapụta ihe CMS bụ, ọ dị mma ịghọta nke ahụ Na mbido Sayensị Kọmputa ma ọ bụ Teknụzụ Weebụ, ịmepụta weebụsaịtị dị mfe nwere ike ịbụ ọrụ dị mgbagwoju anya ma dị ike, ọbụna maka ndị ọkachamara, mgbe mmepe a ga-emejuputa na-eburu ụkpụrụ dị elu nke njiri mara, usoro igodo na ọtụtụ ọdịnaya.
Ọtụtụ oge a niile nke gbanwee ọdịnaya dị ugbu a, na-achọ na ịchọta ngalaba na modulu, na ọbụna na-ejikwa ibe na ihe oyiyi na akụrụngwa na sava ahụ, mere otu ihe ahụ. Programmers ma ọ bụ Web Developers na-eji ngwá ọrụ nke ha ma ọ bụ mmepe, na-eduga n'ịbawanye ụgwọ na mgbagwoju anya nke weebụsaịtị.
Ọnọdụ a kere tacit mkpa maka ngwá ọrụ, nzube zuru oke, dị mfe iji.Abụọ maka ịmepụta weebụsaịtị na-enweghị enyemaka nke ndị ọrụ aka ọkachamara, akụrụngwa teknụzụ dị elu ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ dị na mpụga, yana maka njikwa ha, nchịkwa na ndozi n'ime gburugburu ebe obibi. Ma ọ bụ otu ahụ ka esi bido mepụta "Usoro Ọdịnaya Njikwa" ma ọ bụ CMS iji gboo mkpa a.
N'ihi ya, enwere ike iji ya mee ihe na nkenke na CMS bụ:
"Ngwaọrụ ngwanrọ iji mepụta, jikwaa ma jikwaa weebụsaịtị."
Na n'ụzọ sara mbara karị, ihe CMS bụ:
«An Integrated Development Environment (IDE) nke na-enye anyị ohere ịmepụta, jikwaa, chekwaa ma melite weebụsaịtị, na mgbakwunye na onwe ya. Nke ahụ n'ozuzu gụnyere ụfọdụ nhọrọ na ọrụ ndị ọzọ, dị ka: Katalọgụ ngwaahịa, Map saịtị, Foto veranda, Gburugburu, Mmezu, tszụ ahịa ụgbọ, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ ».
CMS n'echiche ya kachasị mfe agaghị enye ohere ịmepụta weebụsaịtị, kamakwa ịkwalite okike ya na njikwa ya na enweghị mkpa ịmara omimi nke teknụzụ metụtara usoro a kwuru, nke ahụ bụ, ha kwesịrị ikwe ka onye ọrụ bụ isi nke mpaghara ahụ mepụta ma jikwaa otu nwere ụfọdụ ihe ọmụma bụ isi metụtara edezi ibe weebụ yana enweghị nhịahụ.
Maka ezigbo CMS, dị ka WordPress, ga-ekewa n'ime mpaghara abụọ, ihe ndị ọrụ na-ahụkarị na-ahụ dị ka ihe jikọrọ ọnụ, ya bụ, nhazi ma ọ bụ ọdịdị anya nke weebụsaịtị na ọdịnaya ya, ma n'ụdị ederede na multimedia: faịlụ ụlọ ọrụ, ihe oyiyi, ihe nkiri, vidiyo, ụda, na ndị ọzọ.
Ya mere, na CMS zuru oke ma na-arụ ọrụ, nhazi na ọdịnaya ya ga-abụrịrị nke onwe. Ya mere na mgbe a gbanwere nhazi weebụsaịtị, nke a anaghị emetụta ọdịnaya ahụ, nke ga-anọgide na-egosipụta ma gbanwee ya na njirimara nke nhazi ọhụrụ ahụ.
Ya mere, ọ bụghị ezigbo omume ịgbakwunye ihe eji emepụta n'ime ọdịnaya., nke mere na mgbanwe na nhazi nke weebụsaịtị apụtaghị itinyekwu mgbalị dịka ịlele ọdịnaya niile iji kpochapụ ma ọ bụ nyochaa ihe ndị ahụ.
N'ihi ya, Otu n’ime ọrụ izizi mgbe ị na -emepụta weebụsaịtị nwere CMS na-abụkarị iji nlezianya họrọ ma ọ bụ mepụta ọdịdị ya anya ma ọ bụ isiokwu eserese. Iji mechara nwee ike itinye ọdịnaya nke a ga-egosipụta na oghere ndị edebere maka nzube a na template kwuru.
CMS zuru oke kwesịrị ịgụnye ndabara ezigbo ndepụta nke ike, atụmatụ, nhọrọ na ọrụ, nke na-enyere aka ma na imepụta mkpokọta weebụsaịtị na-enweghị mkpa modulu ọzọ ma ọ bụ mmezigharị mpụga, yana mmepe weebụsaịtị dị elu site na modulu, tinye-ons, ma ọ bụ mmegharị ụfọdụ ma ọ bụ njikọta mpụga.
N'ime ha, anyị nwere ike ịkpọtụrụ ndị na-esonụ:
Ọ ga-enwerịrị ike ma ọ bụ arụmọrụ iji nweta ya, na-enweghị mkpa echichi, site na kọmpụta ọ bụla ma ọ bụ Ngwaọrụ nwere ihe nchọgharị weebụ na njikọ Internetntanetị, ya bụ, remotely. Nke a abụghị ihe nwere ike ịnweta ma ọ bụ arụmọrụ, mana ọ na-agbakwunye mgbanwe na ịdị mfe nke iji.
Usoro mmụta ngwa ngwa
Ọ kwesịrị iji ngwa ọrụ ụfọdụ (ọrụ ọfịs) jiri ya mee ihe ngwa ngwa, maka ezigbo ọrụ nke ngwa ọrụ (Ndenye na njikwa ọdịnaya), ọ bụrụhaala na nke a anaghị agụnye mkpa iji nhọrọ nhazi na nchịkwa ya.
Ọdịnaya na njikwa akụ
Ọ ghaghị ịgụnye ụdị ọrụ na njirimara niile maka edezi, ịhazi, nyochaa, mmemme na ibipụta ọdịnaya, ederede na multimedia: faịlụ ụlọ ọrụ, onyonyo, ihe eserese, vidiyo, ụda, na ndị ọzọ.
Nchịkwa na njikwa
Okwesiri igosiputa uzo nhazi ndi bara uru na nke bara uru n’ile ha anya nke ihe nlere anya, iji belata na / ma obu zere nhazi nke ederede ederede maka nhazi nke choro ihe omuma miri emi banyere ngwa ma obu ikpo okwu ebe etinye ya.
Nkọwapụta Onye Ọrụ
Must ga-enwerịrị ike ịmepụta ma jikwaa profaịlụ njirimara dị iche iche, yana ọrụ na ọrụ dị iche iche, dị ka ndị edemede, ndị editọ ma ọ bụ ndị nchịkwa, nke mere na dabere na ha, ndị ọrụ nke weebụsaịtị nwere ike ịme ihe dị iche iche ma nweta ahụmịhe dị iche iche nke ojiji, dabere na nweta, ikike ma ọ bụ mgbochi.
Ederede ederede zuru ezu
Okwesiri itinye onye nhazi ederede dika ihe zuru oke ma di elu dika o kwere mee nke na-enyere aka inye ezigbo usoro ihe omuma obula, si otú a na-eme ka ogugu na nlekota ndi oru ya meziwanye. Ezigbo onye ndezi ederede, n’etiti ọtụtụ ihe, ga-enwerịrị nhọrọ ndị dị ka iji mkpụrụ edemede nwere mkpụrụedemede na mkpụrụedemede, ndepụta ndị agụkọtara ma ọ bụ na ọ bụghị, paragraf, ntinye, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ ghaghị ime ka ọ dịkwuo mfe maka onye ọrụ ịchọta ọdịnaya ọ bụla masịrị ya, na-ekwe ka nhazi ya pụta, iji nweta ngosipụta nke naanị ihe dị mkpa ma chọọ.
Programming ngwa mgbakwunye na ihu
Ọ gha enye ohere ntinye, mwekota na ojiji nke Plugins na Programming Interface Applications (API), iji tinye arụmọrụ ọhụrụ ma ka mma ma ọ bụ akọwapụtara na njikwa ọdịnaya. Na-ekwe ka uto nke Ngwá ọrụ n'onwe ya na weebụsaịtị.
Configurable / customizable visual imewe
Okwesiri ikwado uzo di iche iche nke webusaiti, nke mere na ndi na - eme webusaiti enweghi mmachi ma obu mmachi na oru okike ha, ha nwere ike jikota uzo ha.
Iche iche ọdịnaya na nhazi nhazi
Dịka anyị kwuru na mbụ, CMS dị mma ga-enwerịrị ike ịhapụ onye mmebe ka ọ rụọ ma jikọta atụmatụ ha, yana ndị editọ ma ọ bụ ndị edemede dee ọdịnaya ha, na-enweghị mgbanwe nke otu ma ọ bụ nke ọzọ na-egbochi ibe ha.
Ga-enwerịrị ọgbọ nke weebụsaịtị ndị na-agbaso ụkpụrụ nduzi ma ọ bụ atumatu maka Webmasters nke isi engines ọchụchọ. Yabụ, ihe e kere eke nke weebụsaịtị na-agbaso ihe ndị bụ isi ọnọdụ, ya bụ, na ha bụ "SEO-friendly".
Oru oma, ngwa ngwa na ala akụ oriri
Ọ ga-abụrịrị ngwa kọmputa nke na - anaghị ebubata akụrụngwa sava ahụ ebe ọ nọrọ, ya bụ, ọ na - eji akụ ya eme ihe ezi uche dị na ya maka igbu ya (ebe nchekwa, CPU, diski ike). Ya mere na ọ naghị emetụta arụmọrụ zuru oke nke sava weebụ yana, n'ihi ya, ọ dịghị emetụta mmetụta nke onye ọrụ nke weebụsaịtị.
Nkwado teknụzụ na ndị ọrụ obodo
Ọ ga-enwerịrị nkwado ọrụ aka nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-elekọta ọdịda na njehie nke ngwa ahụ, yana ọtụtụ ndị ọrụ, yana ọgbakọ ha na-ekere òkè, wikis, blọọgụ, n'etiti ngwaọrụ ndị ọzọ, na-enyere enyemaka na ihe ọ bụla merenụ , ma si otú a dozie ngwa ngwa.
Ugbu a WordPress (WP) bụ otu n'ime CMS kachasị eji nke usoro okike niile nke ngwa na mpaghara a. Ọ nwere nnukwu obodo nke ọtụtụ nde ndị ọrụ lekwasịrị anya ọ bụghị naanị na ịde blọgụ kamakwa na ụdị weebụsaịtị ọ bụla, n'agbanyeghị otu ọ dị mfe ma sie ike.
WP malitere na 2003 mgbe Mime Little na Matt Mullenweg mepụtara ndụdụ nke b2 / cafelog. Ma n'ihi mkpa ọ dị maka usoro mbipụta onwe nke onwe, nke mara mma na nke ọma ahaziri maka oge ahụ. Taa WP na-eji asụsụ ahụ eme ihe PHP, y MySQL dị ka njikwa data (DB) na Apache dị ka ọrụ dị ala GPL ikike. Ya mere, kwuru na ngwa ma ọ bụ SW ngwá na-ezukọ na njirimara nke Isi mmalite (CA) eji na Nbudata Software (SL).
WP bụ CMS siri ike nke na-enwere ike ibudata ma jiri., ma ọ bụkwa nnukwu na magburu onwe free na-akwụ ụgwọ saịtị na-ebipụta na mba n'elu ikpo okwu ọrụ a maara dị ka «WordPress.com« nke na-enweta mmelite nke ukwuu. O nwekwaa nwanne nwanyị ọzọ aha ya dị ka «WordPress.org« Ọ dịkwa na Spanish. O nwere nnukwu ozi na teknụzụ bara uru.
Na sara strok, ọ nwere ike kwuru na ọ bụ otu n'ime ndị akacha eji tumadi n'ihi na ya oké ala nke iji, nke na-eme ka ọ dị mma maka ma ndị ọrụ novice na weebụsaịtị mbụ ha ma ọ bụ ndị ọrụ aka ọrụ na ọtụtụ mkpokọta weebụsaịtị ha sitere na obere weebụsaịtị na-enweghị mkpa pụrụ iche dị ka weebụsaịtị ụlọ ọrụ ma ọ bụ blọọgụ dị ike.
Ya nnukwu ukara na unofficial n'ọbá akwụkwọ nke plugins na-ekpuchi fọrọ nke nta ka ọ bụla mkpa dị mkpa na-emejuputa atumatu. Nnukwu obodo nke ndị ọrụ ya, nweela ahụmahụ, nke a na-ahazi ma hazie n'ụwa niile na n'ọtụtụ asụsụ, yana nnukwu ọgbakọ, na-arụkọ ọrụ ọnụ ma baa uru na-edozi nsogbu (ahụhụ na njehie) nke na-eji ngwa a.
WP ezughị oke, mana ọ zuru oke. Nwere ike ịnwe njedebe ụfọdụ na mpaghara 'nke igbe' nke imewe weebụ, mana nke a bụ nrụgide site na nnukwu onyinye nke plugins na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ na-akwụghị ụgwọ, isiokwu na ndebiri dị iji kpuchie ụdị mkpa ọ bụla maka weebụsaịtị ọ bụla.
N'ime akwụkwọ a, anyị ahụla nke ọma ihe CMS bụ na ihe WordPress bụ. N'akwụkwọ ga-eme n'ọdịnihu gbasara WP, anyị ga-enyocha ihe omimi banyere njirimara ugbu a, ya bụ Community, Nkwado ya, kedu isiokwu na ngwa mgbakwunye, yana nke kachasị ewu ewu ugbu a. Na mgbakwunye na ịgagharị ụfọdụ ndụmọdụ nchekwa iji mezuo ebumnuche mbụ nke mbipụta ahụ, ma kpughee na ịntanetị ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ike itinye ya dị na WP.
Maka ugbu a, ọ ga-edo anyị anya na ọ zighi ezi ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ịhapụ anyị ka anyị nwee websaịtị nke ndị ọkachamara nka ruru eru ga-ejikwa ọdịnaya ya.; maka ebumnuche nke ịdabere na ndị ọrụ ụfọdụ, ụgwọ na nwelite nke weebụsaịtị n'onwe ya.
Na ihe ezi uche dị na ya bụ ịhọrọ maka iji CMS ọnụọgụ karịrị njikwa njikwa ọdịnaya iji tụọ, iji nweta ntụgharị na mgbanwe zuru oke, nnabata modulu ma ọ bụ mgbakwunye, akwụ ụgwọ ma ọ bụ n'efu, dị na nnukwu obodo zuru ụwa ọnụ na-enyekwa enyemaka ma ọ bụ nkwado. Tụle WordPress dị ka nhọrọ kachasị mma nke CMS iji mee ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » WordPress: Gịnị bụ CMS? Utility na atụmatụ
Linux kernel 5.1 bịarutere na ndị a bụ akụkọ ya
Facebook na-achọ ndị na-etinye ego maka ego cryptocurrency na sistemu TDC